Science Fiction – Family Of Films
Reset (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Reset (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး Review မရေးတော့ပါဘူး ကောင်းမဲ့ပုံပါ အားပေးကြပါဦးဗျာ FoF ကနေ့နှုပ်တဲ့အနေနဲ့ အများကြီးတင်ပေးမယ်နော် IDMb rating -5.3/10 Google User - 88% Rotten Tomatoes- 50% Genre - Action, Sci-Fi Run time -1h 45min Released Date -30 June 2017 (USA) Director: Hong-Seung Yoon (as Hong Seung Yoon) Quality :1080p.BluRay Format : Mp4 Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source :1080p.BluRay.x264-[YTS.AM] Translated By Hsu Encoded by John Burgoyne 1080p HD 450 MB (openload) 1080p HD 900 MB (openload) 1080p HD 450 MB (Google Drive) 1080p ...
Gravity (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Gravity (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး Speed ဇာတ်ကားနဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Sandra Bullock ရဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကား… Gravity (2013) သည် IMDb 7.8/10 Rotten Tomatoes 96% Metacritic 96% Google users 79% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Alfonso Cuarón ရိုက်ကူးထား၍ Alfonso Cuarón, Jonás Cuarón တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Drama, Sci-Fi, Thriller ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့် အကာသထဲတွင် သောင်တင်နေပြီး ကျန်ရှိနေခဲ့တဲ့ အာကာသယာဉ်မှူးနှစ်ယောက် ဘယ်လိုအသက်ရှင်အောင် ဆက်လက်အတူတူလုပ်ဆောင်ကြမလဲ သိပ္ပံဇာတ်ကားကောင်းကြည့်သူများအတွက် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးပါ… Reviewed by Win Kyaw ...
7Aum Arivu(2011) မြန်​မာစာတန်းထိုး
7Aum Arivu(2011) မြန်​မာစာတန်းထိုး IMDb Ratings:6.1/10 Genre:Action,Sci-Fi,Thrillor Run Time:160mins Released Date:26th Oct 2011 ဒီကားမှာ တရုတ်​ပြည်​အထိ သွား​ရောက်​ပြီး ကွန်​ဖူးပညာရပ်​​တွေနဲ့ ​ဆေးပညာရပ်​ စိတ်​ပညာရပ်​​တွေသင်​​ပေးတဲ့ တမီးလ်​နာဒူးပြည်​နယ်​က ဂုရုကြီး ဘိုဒီဒါမန်​အ​ကြောင်းက စတင်​ပြီး ဇာတ်​လမ်းဟာ ဆွဲ​​ခေါ်သွားလိုက်​တာ ဘဒိုဒါမန်​ရဲ့ တရုတ်​ခရီးမှာ ကပ်​​ဘေးဆိုက်​တဲ့ရွာ​တွေကို ကယ်​တင်​ပြီး ကွန်​ဖူးပညာ လက်​ဆင့်​ကမ်းသင်​​ပေးခဲ့ပုံ​တွေ တရုတ်​လူမျိုး​တွေရဲ့ အကျိုးကို​မျှော်​ကိုးပြီး ​နေရပ်​ကိုမပြန်​​တော့ပဲ ဘိုဒီဒါမန်​တစ်​​ယောက်​ တရုတ်​ပြည်​မှာပဲ အရိုးထုတ်​သွားပုံကအစ စိတ်​ဝင်​စား​အောင်​ ရိုက်​ပြထားတယ်​ ရိုးရာနဲ့ပညာရပ်​​တွေကို တမီးလ်​လူမျိုး​တွေက ​မေ့​ပေမယ့်​ တရုတ်​လူမျိုး​တွေက​တော့ ကယ်​တင်​ရှင်​ကြီး ဘိုဒီဒါမန်​ကို မ​မေ့သလို ကွန်​ဖူးပညာရပ်​ကိုလည်း မျက်​​မှောက်​​ခေတ်​အထိ ​လေးစားကြပါသတဲ့ သို့​ပေမယ့်​ မျက်​​မှောက်​​ခေတ်​​ရောက်​ချိန်​ နိုင်​ငံ​တွေအချင်းချင်း အင်​အားချင်း ပြိုင်​ဆိုင်​ကြတဲ့အခါ တရုတ်​ဟာ အိန္ဒိယကို ဇီဝလက်​နက်​နဲ့ တိုက်​ခိုက်​ဖို့ ကွန်​ဖူးပညာရပ်​နဲ့ ​ဆေးပညာမှာ်​အ​တော်​ဆုံးဖြစ်​တဲ့ ​ဒေါင်​လီ့ကို အိန္ဒိယကို လွှတ်​လိုက်​ပါတယ်​ "အရင်​​ခေတ်​တုန်းက ဓားချင်းယှဉ်​ခုတ်​ပြီး တိုက်​ခိုက်​ကြတယ်​. .​နောက်​​တော့ အ​ဝေးက​နေ ​သေနတ်​နဲ့ ပစ်​တယ်​. . .​နောက်​​တော့ ဒုံးကျည်​​တွေ နဲ့ပစ်​ကြတယ်​. . .ဇီဝလက်​နက်​ဆိုတာက နိုင်​ငံတစ်​ခုလုံးကို ဗိုင်းရပ်​စ်​ပျံ့ နှံ့ ​အောင်​လုပ်​ပြီး တိုက်​ခိုက်​ခြင်းဖြစ်​တယ်​" ကိုယ့်​အတက်​နဲ့ ကိုယ်​ပြန်​ဆူး​တော့မယ့်​အချိန်​ ဆူဘာဆိုတဲ့မျိုးရိုးဗီဇသု​တေသီ ပညာရှင်​​ ကောင်​မ​လေးက ...
Justice League: Crisis on Two Earths (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
Justice League: Crisis on Two Earths (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး Animaiton ချစ်သူများအတွက် family of films (FOF) ရဲ့ တင်ဆက်မှု Justice League: Crisis on Two Earths (2010) သည် IMDb 7.3/10 Google users 95% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Sam Liu, Lauren Montgomery က ရိုက်ကူးထား၍ Dwayne McDuffie, Jerry Siegel တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ အသံသရုပ်ဆောင် William Baldwin, Mark Harmon, Chris Noth တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Animation, Action, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ပြိုင်ဖက်ကမ္ဘာမှ Lex Luthor ကောင်းမွန်တဲ့ ...
Kill Order (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Kill Order (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး ကိုယ့်ဘဝရဲ့သမိုင်းမြက်ခင်းကို မြင်းစီးဖြတ်ကျော်နေတဲ့အချိန်မှာ ရိုင်းခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေ အရုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကို FOF ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ ဖုန်း Reset ချသလို Memory reset ချမပစ်ချင်ဘူးလား.. ကျွန်တော်ကတော့ ဒီကားလေးကိုကြည့်ပြီး Reset ချဖို့ ကြိုးစားနေပြီ... အဖော်မရှိသေးလို့ မချသေးတာ... FoF ပရိသတ်ကြီးလည်း ဒီကားကြည့်ပြီး Memory Reset ချချင်ရင် ကျွန်တော်နဲ့အတူတူချဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Reset ပြောတာနော် 😀😀 ဒီကားထဲမှာပါတဲ့မိဘမဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေးဗစ်လီဟာ သူ့ရဲ့အတိတ်အကြောင်းတွေကို စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံတစ်ခုမှာ memory delete လုပ်ခဲ့တယ်.... ဒီလိုနဲ့ စိတ္တဇဆန်ဆန်ဇာတ်ကွက်တွေက ဒေးဗစ်လီကို အထက်တန်းကျောင်းဆီ ပို့လိုက်ပြန်တယ်...အထက်တန်းကျောင်းမှာ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုက ဝင်စီးပြီး ဒေးဗစ်လီကို ဝင်ဖမ်းကြတော့ ဒေးဗစ်လီရဲ့မသိစိတ်ကနေ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကို တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်.... သူတိုက်ထုတ်ခဲ့တာက သူ့ရဲ့မသိစိတ်ကနေ တိုက်ထုတ်ပစ်လိုက်တာ.... ကျွန်တော်တို့လည်း တစ်ခါတစ်လေ ဇောတစ်ခုခုကြောင့် မထင်မှတ်ထားတာတွေ လုပ်နိုင်ကြတာ ...
Maayavan(2017) မြန်​မာစာတန်းထိုး IMDb Ratings:7.4/10 Genre:Mystery,Sci-Fic,Thrillor Run Time:129mins Released Date:1st Sep 2017 ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်း အင်​စပက်​တာ ကုမုရာဆိုသူဟာ တစ်​​နေ့ မှာ သူခိုးတစ်​​ယောက်​ကို လိုက်​ဖမ်းရင်း လူသတ်​မှုတစ်​ခုနဲ့ အမှတ်​မထင်​ ကြုံလိုက်​ရပါတယ်​ အမျိုးသမီးတစ်​​ယောက်​ကို လူတစ်​​ယောက်​က ရက်​ရက်​စက်​စက်​ သတ်​​နေတာဖြစ်​ပါတယ်​ အဲ့ဒီလူကို လိုက်​ဖမ်းရင်း သူ​သေကိုယ်​​သေ ဖိုက်​ကြရင်း လူသတ်​သမားလည်း ​သေ. . .ကုမုရာလည်း ​ဆေးရုံမှာ သုံးလ​လောက်​ ကုသမှုခံယူလိုက်ရပါတယ်​ ​ဆေးရုံကဆင်းပြီး တာဝန်​ပြန်ထမ်း​ဆောင်​​တော့ ဒုတိယလူသတ်​မှုနဲ့ ကြုံရပြန်​ပါတယ်​ နာမည်​​ကျော်​မင်းသမီး ​သေဆုံးမှုဖြစ်​ပြီး အသတ်​ခံရသူရဲ့ လက္ခဏာနဲ့ ​သေဆုံးပုံက ပထမလူသတ်​မှုနဲ့ ဆင်​တူ​နေပါတယ်​ မင်းသမီးနဲ့ တရင်းတနှီး​နေတဲ့ မိတ်​ကပ်​ဆရာကို မသင်္ကာလို့ အိမ်​လိုက်​သွားပြီး စစ်​​မေးတဲ့အခါ မိတ်​ကပ်​ဆရာဟာ အခုတ​လော ထူးဆန်းတဲ့ အမူအကျင့်​​တွေ ပြုမူ​နေ​ကြောင်း သိရပြီး အမှုဟာ ထင်​တာထက်​ ပိုရှုပ်​​ထွေးလာခဲ့ပါတယ်​ ဒီကားဟာ အိန္ဒိယ​တောင်​ပိုင်းကားတစ်​ကားအ​နေနဲ့ ထူးခြားတဲ့ သိပ္ပံကားတစ်​ကား ဖြစ်​ပြီး တာမီးလ်​မင်းသား Sundeep Kishan နဲ့​ဘောလိဝုဒ်​မင်းသားကြီး Jackie Shroff တို့ အပြိုင်​ကြဲထားတဲ့ ...
Spider-Man (2002) မြန်မာစာတန်းထိုး
Spider-Man (2002) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 7.3/10 Rotten Tomatoes 89% Google User 89 % Genre: Action, Adventure, Sci-Fi Run Time:2hours 01 mins Spider-Man (2002) သည် IMDb 7.3 Rotten Tomatoes 89% Goggle USers 89% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Sam Raimi က ရိုက်ကူးထားကာ Stan Lee, Steve Ditko တို့ကဇာတ်ညွှန်းရေးသားသရုပ်ဆောင် Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. အလွန်တရာ ရှက်တတ်ကြောက်တတ်တဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသားလေးကို ပင့်ကူတစ်ကောင်က အကိုက်ခံရတဲ့အခါ ပင့်ကူလို စွမ်းရည်မျိုးရရှိလာပြီး သူ့ရဲ့မိသားစုအပေါ်ကျရောက်လာမယ် ...
Spider-Man2(2004) မြန်မာစာတန်းထိုး
Spider-Man2(2004) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 7.3/10 Rotten Tomatoes 93% Google User 92 % Genre: Action, Adventure, Sci-Fi Run Time:2hours 07 mins Spider-Man2(2004) IMDb 7.3 Rotten Tomatoes 93% Goggle USers 92% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Sam Raimi က ရိုက်ကူးထားကာ Stan Lee, Steve Ditko တို့ကဇာတ်ညွှန်းရေးသားသရုပ်ဆောင် Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Peter Parker သည် အလွန်တော်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင် ဒေါက်တာ Otto ...
Identicals (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Identicals (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 6.0/10 Genre: Sci-Fi, Thriller Run Time: 1 hour 40 mins Identicals (2015) သည် IMDb 6.0 ရထားသော ဒါရိုက်တာ Simon Pummell က ကိုယ်တိုင် ရေးသားရိုက်ကူးထားကာ သရုပ်ဆောင် Nick Blood, Nora-Jane Noone, Lachlan Nieboer တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Sci-Fi, Thriller ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ငါတို့နှစ်ယောက်ဟာ ငါတို့ ထင်ထားသလောက် မထူးခြားပါဘူး အသစ်စက်စက် ယူ ဟာ တကယ့် ရိုမက်တစ်ဆန်ဆန် ရင်တုန်စရာတစ်ခုပါ ထူးခြားတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း အိပ်မက်ဆိုးမျာကို ပြန်လည်စီစဉ်ထားသလို သိပ္ပံစိတ်ကူးယာဉ် ရင်တုန်စရာ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ကားလေးမို့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး….. Reviewed By Win Kyaw Thu Translated by Linn Thura Encoded ...
The Colony (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Colony (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 5.3/10 Google User 75 % Genre: Action, Horror, Sci-Fi Run Time: 1 hour 35 mins The Colony (2013) သည် IMDb 5.3 Google User 75 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ Jeff Renfroe ကိုယ်တိုင် ရေးသား ရိုက်ကူးထား၍ ), Svet Rouskov က ထပ်မံစိတ်ကူးပေါင်းထည့်ထား၍ သရုပ်ဆောင် Kevin Zegers, Laurence Fishburne, Bill Paxton တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Horror, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. နောက်ပိုင်းရေခဲခေတ်တွင် မြေအောက် တပ်အဖွဲ့က သဘာဝထက် ဆိုးရွားသော ခြိမ်းခြောက်မှုများကို တွန်းလှန်ကာ လူသားဆက်လက်တည်ရှိရေးအတွက် ဆက်လက်ရှင်သန်သူများက ...
Maze Runner: The Scorch Trials (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Maze Runner: The Scorch Trials (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး Maze Runner: The Scorch Trials (2015)သည် IMDb 6.3 Rotten Tomatoes 46% Google User 90% ဒါရိုက်တာ Wes Ball ရိုက်ကူးထား၍ T.S. Nowlin က James Dashner ရဲ့ "The Scorch Trials" ဝတ္ထုကို ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Sci-Fi, Thriller ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးနောက် Maze Glader သည် မမြင်နိုင်တဲ့အတားအဆီးများနဲ့ ပြည့်နေသော နယ်မြေကနေ လွတ်မြောက်ရန် စိန်ခေါ်မှု လမ်းကြောင်းအသစ်ကို ရင်ဆိုင်ရလေသောအခါ ...
Red Planet (2000) မြန်မာစာတန်းထိုး
Red Planet (2000) မြန်မာစာတန်းထိုး Red Planet (2000) သည် IMDb 5.7 Google User 64% ဒါရိုက်တာ Antony Hoffman ရိုက်ကူးထား၍ Chuck Pfarrer, Chuck Pfarrer တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Val Kilmer, Carrie-Anne Moss, Tom Sizemore တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Sci-Fi, Thriller ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. အာကာသယဉ်မှူးများနဲ့ သူတို့ရဲ့ စက်ရုပ်ခွေး AMEE (Autonomous Mapping Evaluation and Evasion)တို့ဟာ ကြောက်စရာစစ်ဆင်ရေးကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အင်္ဂါကို ရှာဖွေပြီး ပျက်စီးတော့မယ်ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်ဖို့ အဖြေထုတ်ဖို့ကြိုးစားကြရာ အောင်မြင်မလား အဆင်မပြေမလား သိပ္ပံအက်ရှင်ကားကြိုက်သူများ ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါဦးဗျာ…. Review By Win Kyaw ...
John Carter (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
John Carter (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး John.Carter.2012 သည် IMDb 6.6 Rotten Tomatoes 51% Google User 87% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Andrew Stanton ရိုက်ကူးထားပြီး Andrew Stanton , Mark Andrews တို့ ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ Kitsch, Lynn Collins, Willem Dafoeတို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ….. Barsoom ဆီသို့ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ရင်း barren ဂြိုလ်တွင် ၁၂ ရှည်တဲ့ barbarians တွေရဲ့ ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ ကြုံရလေသည် ဒီသတ္တ၀ါကြီးများရဲ့ အကျဉ်းသားအဖြစ် ဖမ်းဆီခံရကာ Woola နဲ့ မင်းသမီးလိုကို ကယ်ရင်း လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားပုံ အက်ရှင်စွန့်စားခန်းများကို ဇာတ်လမ်းမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားကြပါခင်ဗျာ…. Quality - 1080p.Bluray Subtitle - ...
Death Race: Inferno (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Death Race: Inferno (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး Death Race: Inferno (2013) သည် IMDb 5.5 Rotten Tomatoes 50% Google User 74% ဒါရိုက်တာ Roel Reiné က ရိုက်ကူးထား၍ Tony Giglio , Paul W.S. Anderson တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် : Luke Goss, Tanit Phoenix Copley, Danny Trejo တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Sci-Fi, Thriller ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ရဲလူသတ်သမား အဖြစ်ထင်ရှားသူ Carl Lucas, ခေါ် Frankenstein Death Race လိုခေါ်တဲ့ အလွန်ရက်စက်ကြမ်းကြိုတ်ရာတွင် နာမည်ကြီးအကျဉ်းထောင်၏ ဆူပါစတားဒရိုင်ပါတစ်ယောက်ဖြစ်သည် ...
Death Race2(2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
Death Race2(2010) မြန်မာစာတန်းထိုး Death Race2(2010) သည် IMDb 5.6 Google User 75% ဒါရိုက်တာ Roel Reiné က ရိုက်ကူးထား၍ Paul W.S. Anderson , Tony Giglio တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Luke Goss, Lauren Cohan, Sean Bean တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Sci-Fi, Thriller ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ပထမဇာတ်ကားအစတွင် ပြိုင်ပွဲတွင် သေးဆုံးသွားသော xplores the origins of the first "Frankenstein" ကားဒရိုင်ဘာ Carl "Luke" Lucas ရဲ့ မူလဇာစ်မြစ်ကို ပြန်လည်ဖော်ပြရိုက်ကူးထားသော ...
I’m notarobot 2017 Korea TV series မြန်မာစာတန်းထိုး
I'm notarobot 2017 Korea TV series မြန်မာစာတန်းထိုး I'm not Robot ( သူမသာ စက်​ရုပ်​မ​လေး မဟုတ်​ခဲ့ရင်​...) I'm Not A Robot ( သူမသာ စက်ရုပ်မလေးမဟုတ်ခဲ့ရင်... ) ကင်မင်ဂျူ ( Yoo Seung Ho) သူဟာ သည်ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ အဓိက MainLead လေးပါ ချမ်းသာပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုက ဆင်းသက်လာသူ လူငယ်ကောင်လေး တစ်ယောက်ပါ သူ့မှာ အံသြစရာကောင်းတဲ့ အကြီးမားဆုံး အားနည်းချက်တစ်ချက်ဟာ ရောဂါတစ်ခုအဖြစ်စွဲကပ်နေပါတယ် ထိုအရာကတော့.. သူဟာ လူတွေနဲ့လုံးဝထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ လူအများနဲ့ ဓာတ်မတည့်တဲ့ Human Allergic ဆိုတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတစ်ခုရှိနေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဂျိုဂျီအာ ( Chae Soo Bin ) သူမကတော့ သွက်လက်ထက်မြတ်တဲ့ မိန်းမလှလေးတစ်ဦးပါ သည်ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ Female Lead လေးဖြစ်တဲ့ ဂျီအာအဖြစ် သရုပ်ဆောင်မယ့် ChaeSooBin လေးကို နောက်ထပ်ဇာတ်ရုပ်တမျိုးအနေနဲ့ မြင်တွေ့ရဦးမှာကတော့ Ah Ji3လို့အမည်ပေးထားတဲ့ စက်ရုပ်မလေး တစ်ယောက်အဖြစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်. ***** Human Allergic ရှိတဲ့ ကောင်ချောလေးဟာ လူတွေနဲ့ မတူညီကွဲပြားစွာ ...
Surrogates (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
Surrogates (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 6.3/10 Google User : 82 % Genre: Action, Sci-Fi, Thriller Run Time: 1 hour 29 mins Surrogates (2009) သည် IMDb 6.3 Google User 82% ဒါရိုက်တာ Jonathan Mostow က ရိုက်ကူးထား၍ Michael Ferris, John Brancato တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Bruce Willis, Radha Mitchell, Ving Rhames တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Sci-Fi, Thriller ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… လူသားများ သီးသန့်နေထိုင်ပြီး အစားထိုးစက်ရုံများနှင့်သာ အပြန်အလှန်အလုပ်လုပ်နေသာ ကမ္ဘာတစ်ခုတွင် ရဲတစ်ယောက်ဟာ တခြားသူများ၏ အစားထိုးစက်ရုပ်များကို အသတ်ခံရမှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ...
TRON: Legacy (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
TRON: Legacy (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 6.8/10 Rotten Tomatoes 51% Google User : 93 % Genre: Action, Adventure, Sci-Fi Run Time:2hours 27 mins TRON: Legacy (2010) သည် IMDb 6.8 Rotten Tomaotes 51% Google User 93% ဒါရိုက်တာ Joseph Kosinski က ရိုက်ကူးထား၍ Edward Kitsis, Adam Horowitz တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… ကမ္ဘာအတုကို ဒီဇိုင်းဆွဲထားသူတစ်ဦးရဲ့သားဟာ သူရဲ့အဖေကို ...
Captain America: Civil War (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Captain America: Civil War (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 7.9/10 Rotten Tomatoes 91 % Google User : 92 % Genre: Action, Adventure, Sci-Fi Run Time:2hours 27 mins Captain America: Civil War (2016) သည် IMDb 7.9 Rotten Tomatoes 91% Google User 92% ဒါရိုက်တာ Anthony Russo, Joe Russo တို့က ရိုက်ကူးထား၍ Christopher Markus, Stephen McFeely တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, ...
Captain America: The First Avenger (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
Captain America: The First Avenger (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 6.9/10 Rotten Tomatoes 80 % Google User : 91 % Genre: Action, Adventure, Sci-Fi Run Time:2hours4mins Captain America: The First Avenger (2011) သည် IMDb 6.9 Rotten Tomatoes 80% Google User 91% ဒါရိုက်တာ Joe Johnston ရိုက်ကူးထား၍ Christopher Markus, Stephen McFeely တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Chris Evans, Hugo Weaving, Samuel L. Jackson တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, ...
G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 5.8/10 Google User : 78% Genre: Action, Adventure, Sci-Fi Run Time: 1 hour 58 mins G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) သည် IMDb 5.8 Google User 78% ဒါရိုက်တာ Stephen Sommers ရိုက်ကူးထား၍ Stuart Beattie, David Elliot တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားထားကာ သရုပ်ဆောင် Dennis Quaid, Channing Tatum, Marlon Wayans တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… G.I. Joe ...
Armageddon (1998) မြန်မာစာတန်းထိုး
Armageddon (1998) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 6.6/10 Google User : 82% Genre: Action, Adventure, Sci-Fi Run Time:2hours 31 mins Armageddon (1998) သည် IMDb 6.6 Google User 82% ဒါရိုက်တာ Michael Bay က ရိုက်ကူးထား၍ Jonathan Hensleigh, J.J. Abrams တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားထားကာ သရုပ်ဆောင် Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. တက္ကစက်ပြည်နယ်၏ အရွယ်အစားရှိတဲ့ ဥက္ကာပျံတစ်ခု တစ်လအတွင်း ကမ္ဘာကို တိုက်ခိုက်တော့မည်ကို သိရှိရသောအခါ နာဆာမှာ ကမ္ဘာကို ကယ်တင်ရန် ...
Iron Man3(2013) မြန်​မာစာတန်းထိုး
Iron Man3(2013) မြန်​မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 7.2/10 Rotten Tomatoes : 79% Google User : 88% Genre: Action, Adventure, Sci-Fi Run Time:2hours 10 mins Iron Man3(2013) သည် IMDb 7.2 Rotten Tomatoes 79% Google User 88 % ဒါရိုက်တာ Shane Black က ရိုက်ကူးထား၍ Drew Pearce, Shane Black တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးထားကာ Robert Downey Jr., Guy Pearce, Gwyneth Paltrow တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် ...
Iron Man2(2010) မြန်​မာစာတန်းထိုး
Iron Man2(2010) မြန်​မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 7.3/10 Rotten Tomatoes : 73% Google User : 86% Genre: Action, Adventure, Sci-Fi Run Time:2hours4mins Iron Man2(2010) သည် IMDb 7.3 Rotten Tomatoes 73% Google User 86 % ဒါရိုက်တာ Jon Favreau က ရိုက်ကူးထား၍ Justin Theroux , Stan Lee (Marvel ရုပ်ပြစာအုပ်ရေးသူ) တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးထားကာ Robert Downey Jr., Mickey Rourke, Gwyneth Paltrow တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Sci-Fi ...
Iron Man (2008) မြန်​မာစာတန်းထိုး
Iron Man (2008) ) မြန်​မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 7.9/10 Rotten Tomatoes : 94% Google User : 90% Genre: Action, Adventure, Sci-Fi Run Time:2hours6mins Iron Man (2008) သည် IMDb 7.9 Rotten Tomatoes 94% Google User 90% ဒါရိုက်တာ Jon Favreau က ရိုက်ကူးထား၍ Mark Fergus , Hawk Ostby တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးထားကာ သရုပ်ဆောင် Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Terrence Howard တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် ...
I Am Number Four (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
I Am Number Four (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 6.1/10 Google User 90 % Genre:Action, Adventure, Sci-Fi Run Time : 1 hour 49 minutes I Am Number Four (2011) သည် IMDb 6.1 Google User 90 % ဒါရိုက်တာ D.J. Caruso က ရိုက်ကူးထား၍ Alfred Gough, Miles Millar တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးထားကာ သရုပ်ဆောင် Dane Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Dianna Agron တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ဂြိုလ်သားများနှင့် သူတို့၏အစောင့်အရှောက်များသည် ...
Thor: The Dark World (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Thor: The Dark World (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 7.0/10 Rotten Tomatoes : 66% Google User 83% Genre: Action, Adventure, Sci-Fi Run Time : 1 hour 52 minutes Thor: The Dark World (2013) IMDb 7.0 Rotten Tomatoes 66% Google User 83 % ဒါရိုက်တာ Alan Taylor က ရိုက်ကူးထား၍ Christopher Yost, Christopher Markus တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးထားကာ သရုပ်ဆောင် Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ...